မူလစာမျက်နှာလုံခြုံရေး Enhance မှထိပ်တန်းကင်မရာ Apps ကပ | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » မူလစာမျက်နှာလုံခြုံရေး Enhance မှထိပ်တန်းကင်မရာ Apps ကပ
မူလစာမျက်နှာလုံခြုံရေး APK ကို Enhance မှထိပ်တန်းကင်မရာ Apps ကပ
အိမ်၏လုံခြုံရေးအမြဲလူသားတွေကိုအရေးပါသောအချက်တစ်ချက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သိသာထင်ရှားတဲ့လူတိုင်းကသူတို့နေထိုင်ရာလုံခြုံလုံခြုံဖြစ်ချင်ပါလိမ့်မယ်။ breakouts သို့မဟုတ်ခိုးယူ၏အမှု၌, လူတွေဖြစ်ပျက်ထံမှအဖြစ်အပျက်တားဆီးဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။ ဤအကြောင်းကြောင့်, တပ်လှန့်စနစ်များကိုအချိန်နှင့်အတူ created နှင့်အဆင့်မြှင့်ပါပြီ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်အရာအားလုံးကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ထိပ်တန်းကင်မရာ app ကိုလိုအပ်ပါတယ်။
ခေတ်မီနည်းပညာနှင့်တကွ, အသုံးပြုသူရဲ့ device ကိုမှတိုက်ရိုက် apps များကထိန်းချုပ်ထားသည်ဟုကင်မရာများတဦးတည်းကသူတို့အိမ်တွေမှာပေးနိုငျကွောငျးကိုလုံခြုံရေး၏နောက်ဆုံးအဆင့်ကိုဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါကင်မရာများ standby အပေါ်အမြဲဖြစ်ကြပြီးမည်သည့်သံသယဖြစ်ဖွယ်လှုပ်ရှားမှုများ၏အမှု၌ပိုင်ရှင်သတိပေးပါလိမ့်မယ်။ လက်ရှိအချိန်တွင်ရရှိနိုင်နေအိမ်လုံခြုံရေးကင်မရာ app များကိုတွေအများကြီးရှိပါတယ်။
ထိပ်ကင်မရာ app များကိုအချို့သည်ပေးထားကြသည် below-
1 ။ မူလစာမျက်နှာလုံခြုံရေးကင်မရာ WardenCam - ြပန်သုံးရန်ဟောင်းဖုန်းများ
သုံးကြသည်မဟုတ်ထားတဲ့တက်ဘလက်သို့မဟုတ်စမတ်ဖုန်းများသောသူတို့က, ဒီ app ကိုလုံခြုံရေးကင်မရာများအဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန်ထိရောက်သောမော်နီတာသို့သူတို့ကိုငါလှည့်နိုင်ပါတယ်။ ဤနည်းတံခါးကိုပြင်ပတွင်သွားဘာမှတစ်ဦးခန်း၌သို့မဟုတ်နေရာတိုင်းမှာကင်မရာထားလမ်းကြောင်းထဲမှာသိုထားနိုင်ပါတယ်။
ဒီ app နှစ်ခုစမတ်ဖုန်းများတွင်ဒေါင်းလုပ်ရယူပြီးသွင်းယူခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အဲဒီလမ်းတကင်မရာနှင့်အခြားသည့်မော်နီတာဖြစ်လာဖြစ်လာသည်။ ထိပ် features တွေ WardenCam ယင်း၏ဆက်သွယ်မှုများပါဝင်သည်။ ဒါဟာတည်ငြိမ် 3G, 4G, LTE ကို, နှင့် Wi-Fi ချိတ်ဆက်မှုနှင့်အတူဘယ်နေရာမှာမဆိုအလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါဟာအစအီးမေးလ်များသို့မဟုတ်တွန်းအားပေး-အကြောင်းကြားစာမှတဆင့်ရွေ့လျားမှု detection စနစ်ကနေတဆင့် sensing အပေါ်သတိပေးချက်များပေးပါသည်။ မိုဃ်းတိမ်သိုလှောင်မှုလုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပါသည်။ အကွိမျမြားစှာကင်မရာများ 24 ×7စီးဆင်းနိုင်သည့် setup ကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ အသုံးပြုသူများသည်အသံများကိုနားထောင်ရန်နှင့်အဖြစ်ကောင်းစွာ devices များအနေဖြင့်စကားပြောနိုင်သည်။
ဂရိတ် app ကို! ငါ့ဖုန်းကနေအပြည့်အဝအလုပ်လုပ်သည်။
အဆိုပါ streaming များအရည်အသွေးမြင့်ကြီးမြတ်ပါ! ဒါဟာရိုးရာ CCTV ထက်အများကြီးရှင်းလင်းလှပါတယ်။
ငါ streaming များမသုံးနေပြီကြုံတွေ့ကြသည်။ ချောမွေ့သောဗီဒီယိုထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်အလွန်အမင်းထိရောက်သော!
2 ။ DIY CCTV မူလစာမျက်နှာလုံခြုံရေးကင်မရာ - အဲဖရက်
အိုင်ပီ cam, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်မော်နီတာ, ကလေးမော်နီတာအဖြစ်သို့မဟုတ်ပဲမျက်စိစောင့်ရှောက်ခြင်းအဘို့အပြုမူနိုင်သောအိမ်မှာလုံခြုံရေးကင်မရာများအဘို့ရှာသောသူတို့၌, အဲဖရက်ဖြေရှင်းနည်းဖြစ်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးကိုနေအိမ်လုံခြုံရေးကင်မရာ app ကိုအဖြစ်မဲပေးကြောင့်လည်းအများဆုံးဒေါင်းလုတ်လုပ်ထားပြီးနှင့်အသုံးပြုသူများတောက်ပန်ဆောင်မှုများပေးလျက်ရှိသည်။
app ကို၏ installation နှစ်ခုကိရိယာများပေါ်တွင်အမှုကိုပြုခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အဆိုပါ app များကိုနှစ်ယောက်စလုံးအတူတူ Google အကောင့်နဲ့ log in ပြုလုပ်ပြီးခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကတဦးတည်းလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အားလုံးပါပဲ။ 3G, 4G နှင့် Wi-Fi ကိုဆက်သွယ်မှုနှင့်အတူ, အဲဖရက်က high-quality ပုံနဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုပေးပါသည်။ အဆိုပါအဆိုကိုအာရုံခံအလွန်အထိခိုက်မခံသည်နှင့်ပင်နည်းနည်းလေးလှုပ်ရှားမှုများကိုဖမ်းနိုင်ပါတယ်။
အဲဖရက်အဖြစ်ကောင်းစွာသုံးစွဲဖို့အလွန်လွယ်ကူသည်။ မျိုးစုံဘျနှင့်ကြည့်ရှု options များနှင့်အတူအလွန်မြန်ဆန်စွာဆက်သွယ်နှင့်မျှမနှောင့်ယှက်နှင့်အတူရှင်းရှင်းလင်းလင်းပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများအားပေးပါသည်။ Two-လမ်းအသံနှင့်အတူအသုံးပြုသူများနားထောင်ပြီးသူတို့လိုလျှင်စကားပြောနိုင်သည်နှစ်ဦးစလုံး။
တစ်ငါးမျက်လုံးမှန်ဘီလူးဖုန်းကိုတွဲသောအခါ, view ၏အကွာအဝေးက ultra-wide ဖြစ်လာသည်။ ပြင်ပအထိုင်လိုအပ်မရှိပါ။ ဘယ်နေရာမှာမဆို device ကို၎င်း၏ဘူတာရုံရှိလိမ့်မည်ထားရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ အဲဖရက်အချို့အဆင့်မြင့် features တွေကိုတစ်ချိန်က enabled, device ကိုစီမံခနျ့ခှဲသူ၏ခွင့်ပြုချက်လိုအပ်သည်သော်လည်းထိုသို့အသုံးပြုသူမှအဆုံးစွန် streaming များလုံခြုံရေးဝန်ဆောင်မှုပေးသွားမှာပါ။
တပ်ဆင်ရန်နှင့်သုံးစွဲဖို့အလွန်လွယ်ကူပါတယ်! အဘယ်သူမျှမလဲ tutorial ။
လက်စွဲဆင်းအစဉ်အဆက်ကိုအကောင်းဆုံးလုံခြုံရေး cam app ကို! ငါတောင်ငါ့အရုံးကနေအိမ်မှာအရာအားလုံးတခုတခုအပေါ်မှာမျက်စိထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။
ကလေး cam အဖြစ်ဤအသုံးပြုသောငါကျေနပ်ထက်ပိုဖြစ်ကြောင်းကိုပြောပါရန်ရှိသည်။ ကလေးအပေါ်မိတ်ဆက်အခါတိုင်းကျွန်မအနေနဲ့တပ်လှန့်ရ။
ငါ၏အဟောင်းများကိုစမတ်ဖုန်းနှစ်ဦးစလုံးကို Ultra HD ကိုကင်မရာများရှိသည်။ ရလဒ်အနေနဲ့ငါပြတ်တောက်ခြင်းမရှိဘဲအရည်အသွေးမြင့်အတွက်ဗီဒီယိုများအများစုကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ အခြားလုံခြုံရေးကင်မရာများထက်အများကြီးပိုကောင်း။
3 ။ မူလစာမျက်နှာလုံခြုံရေးကင်မရာအဖြစ်သင့်ဖုန်းအဟောင်း Make - SeeCiTV
အဲဒီအစားအသစ်နှင့်အကုန်အကျလုံခြုံရေးကင်မရာများဝယ်, ဒီ app ၏အကူအညီဖြင့်အဆင့်မြင့်လုံခြုံရေးတပ်ထဲသို့အဟောင်းစမတ်ဖုန်းလှည့်။ SeeCiTV setup ကိုနှင့်အသုံးပြုမှုအလွန်လွယ်ကူသည်။ သင့်လျော်သော Wi-Fi ချိတ်ဆက်မှုနဲ့ Gmail ID နဲ့နှစ်ခုစမတ်ဖုန်းချက်ချင်းကင်မရာအဖြစ်သရုပ်ဆောင်များအတွက်အဆင့်မြင့်လုံခြုံရေး cams, ကြည့်ရှုရည်ရွယ်ချက်များအတွက်တဦးတည်းနှင့်အခြားသို့လှည့်နိုင်ပါသည်။
အဆိုပါ cams ဘယ်နေရာမှာမဆိုနေသမျှကာလပတ်လုံးသင်တစ်ဦးတည်ငြိမ်အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုရှိအဖြစ်ကနေဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ SeeCiTV ထို့အပြင် Two-နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ် Full HD ကို 1080p streaming များနှင့်အသံထောက်ခံပါတယ်။ မျက်နှာပြင်အဖြစ်ကောင်းစွာအသုံးပြုမှုရှိနေစဉ်ချွတ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်, ဘက်ထရီသုံးစွဲမှုလမ်းလျော့နည်းသည်။ အသုံးပြုသူများ devices များနှင့်ချိတ်ဆက်ရန် password များသို့မဟုတ်တံသင်ပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။
အဆိုပါအဆိုကို detector အဖြစ်ကောင်းစွာတော်တော်တိကျသည်။ အားလုံးဗီဒီယို Google Drive ကို၏ Cloud သိုလှောင်မှုထဲမှာသိမ်းထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင်လုံခြုံရေးကင်မရာများအဝေးမှအဖြစ်ကောင်းစွာပယ်အပေါ်လှည့်နိုင်ပါသည်။ နှစ်ယောက်ထက်ပိုစမတ်ဖုန်းလည်းချိတ်ဆက်နိုင်ပြီးသူတို့ကင်မရာများသို့မဟုတ်ကြည့်ရှုမော်နီတာနှစ်ဦးစလုံးအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ငါ၏အ devices တွေကိုနှစ်ဦးစလုံးထံမှဿုံအလုပ်လုပ်ပါတယ်။
လုံခြုံရေး cams တက်အပူသည်အခြားထက်လမ်းကောင်း၏။ ကျွန်ုပ်၏ဖုန်းမှာအားလုံးအပူမရပါဘူး။
အစဉ်အမြဲငါမြင်ကြပြီဆုံးစွယ်စုံ app ကို။
Wi-Fi ကိုအတူ5ပစ္စည်းတွေထဲမှာအသုံးပြုခဲ့သည်။ မည်သည့်ချို့ယွင်းသို့မဟုတ်သုံးနေပြီမပါဘဲဿုံအလုပ်လုပ်ပါတယ်။
4 ။ လုံခြုံရေးကင်မရာ CZ
ဒီ app မိဘသို့မဟုတ်မိသားစုစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်သွားလာလျက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှုများအတွက်လုံခြုံရေးကင်မရာအဖြစ်လုပ်ကိုင်ဖို့အထူးဒီဇိုင်းထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင်ကြောင့်လည်းအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်မှုကင်မရာ, အကြီးတန်းစောင့်ရှောက်မှုမော်နီတာအဖြစ်တစ်ခုသို့မဟုတ်ကလေးစောင့်ရှောက်မှုမော်နီတာအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
အဆိုပါ Two-လမ်းအသံဖိုင်စကားပြောနှင့်နားထောင်ခြင်းနှင့်ညဉ့်ရူပါရုံကို mode ကိုအဖြစ်ကောင်းစွာမှောင်မိုက်မှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုဖွနိုင်ပါတယ်။ လုံခြုံရေးကင်မရာ CZ လုံးဝအခမဲ့များမှာအားလုံးသောအဆင့်မြင့် features တွေ, အများကြီးရှိပါတယ်။ သူတို့ထဲကတချို့ကရွေ့လျားမှု detection စနစ်, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှအသံဖမ်း, features တွေချုံ့ချဲ့, မျိုးစုံကင်မရာထောက်ခံမှု, တွန်းအားပေးသတိပေးချက်များနှင့်ဆက်သွယ်မှုမှလေးစားမှုနှင့်အတူဗွီဒီယိုအရည်အသွေးညှိပါဝင်သည်။
အလွန်တည်ငြိမ်ပြီး app ကို။ ပျက်ကျခြင်းနှင့်ယခုအထိအဲလိုဘဲမရှိပါ။ မြင့်မားတုံ့ပြန်မှု။
နည်းနည်းလေးလှုပ်ရှားမှုများကိုတက် Picks နှင့်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အပေါ်မှားယွင်းသောနှိုးစက်အကဲဖြတ်ထားပါသည်! အလွန်စမတ် app ကို။
လွန်းညမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပုံရိပ်တွေကိုတွေ့မြင်နိုငျ! ဒါဟာနီးပါးအနီအောက်ရောင်ခြည်နဲ့တူရဲ့။ အလွန်အထင်ကြီး။
အဆိုပါ zoom ကိုအခြားလုံခြုံရေး cams ထက်လမ်းပိုကောင်းအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ရုပ်ပုံအရည်အသွေးမြင့်လွန်းကောင်းသောပါ!
တောင်မှငါ့အနိမ့်အင်တာနက်မြန်နှုန်းနဲ့အတူကမပြတ်မတောက်ဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။ သေချာတာပေါ့အရည်အသွေးနည်းနည်း degrades ဒါပေမယ့်အလွန်ကတန်ဖိုးရှိပါတယ်။
5 ။ မူလစာမျက်နှာလုံခြုံရေးကင်မရာ - ပင်မစာမျက်နှာမျက်လုံး
သငျသညျ DVR စနစ်များသို့မဟုတ် IP ကင်မရာကိုအစားထိုးရှာနေနေတယ်ဆိုရင်, ဤသူသည်သင်တို့အဘို့အရုံပြီးပြည့်စုံသော App ဖြစ်ပါတယ်။ တည်ငြိမ်သောအင်တာနက်ချိတ်ဆက်နှစ်ယောက်စမတ်ဖုန်းနှင့်အတူ, မည်သူမဆိုသင့်အိမ်စောင့်ကြည့်ဖို့ဒီ app ကိုသုံးနိုင်သည်။ ဒါကြောင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောအရာတစ်ခုခုကို detect သည့်အခါမတ်ရွေ့လျားမှု-detect နှင့်အတူ, ဒီ app ကိုသာအရှင်ဘက်ထရီချွေတာ, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှသွားလိမ့်မည်။
ဒီတခါကြားနေရမှတစ်ဆင့်သတိပေးနှင့်မက်ဆေ့ခ်ျများတွန်းရရှိနိုင်ပါသည်။ အရေးယူဆောင်ရွက်ချက်များကို remote control လည်းလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။ ထို့ကြောင့်တဦးတည်းကိုသူတို့နေအိမ်စွန့်ခွာရှေ့တော်၌ထို app ကို activate လုပ်ဖို့မေ့နေလျှင်စိတ်ပူစရာမလိုပေ။ ဒီ app ကိုအသုံးပြုခြင်း၏အားသာချက်တစ်ခုကြောင့်အလိုအလျောက်တုံ့ပြန်မှုအတွက်အလွန်ရှင်းလင်းစွာအဖြစ်အပျက်ဓါတ်ပုံကြာသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ အသုံးပြုသူလည်းအရှင်နေ့တိုင်းကိုယ်တိုင်စတင်ရန်ရှိခြင်းမဟုတ်, ထိုရက်သတ္တပတ်၏အသီးအသီးနေ့အဘို့ prescheduled စောင့်ကြည့်မှုအချိန်ဇယားကိုဖန်တီးနိုင်သည်။
ဒါကွောငျ့မူလစာမျက်နှာမျက်လုံးသုညကုန်ကျစရိတ်မှာ CCTV စုံစမ်းစစ်ဆေးဘို့ပြီးပြည့်စုံအစားထိုးဖြစ်ပါတယ်။ အခြေခံအင်္ဂါရပ်များအများစုမှာအခမဲ့လုံးဝအသုံးပြုသူများထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်။ အဆိုပါလိုလားသူဗားရှင်းအဖြစ်ကောင်းစွာတစ်ဦးအနည်းငယ်မျှသာကုန်ကျမှာအနည်းငယ်ပိုကောင်းနှင့်အဆင့်မြင့် feature များပေးသည်။
လုံးဝအခမဲ့နှင့်ထိပ်ကင်မရာ app များကိုတဦး။ အဆိုပါလိုလားသူဗားရှင်းကိုလည်းအဆင့်မြင့် features တွေလိုခငျြသောသူတို့အဘို့အလွန်လျော့နည်းပညတ်။
သင့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲကနေသင့်အိမ်တစ်လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ကိုစောင့်ရှောက်ရန် Excellent က app ကို။
ငါ CCTV ကင်မရာမတတ်နိုင်နှင့်အစားမူလစာမျက်နှာမျက်လုံးအသုံးမနိုင်ဘူး။ ဒါဟာဒဏ်ငွေအလုပ်လုပ်ပါတယ်။
ထိပ်တန်းက Android ကင်မရာ Apps ကပ ထိပ်တန်းကင်မရာ Apps ကပ အန်းဒရွိုက်သည်ထိပ်တန်းကင်မရာ Apps ကပ